Insect Archives - Owl Myanmar News
OM | June 13, 2021
မာန်ချခဲ့ရသော ပန်းကလေး ကျမ နာမည်ကတော့ ဖြူဖြူပါ ။ကျမ ငယ်ရွယ်စဉ် ကျောင်းသူဘဝတည်းကပင် ကျမ အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရတယ်။ ကျမ ဘဝ ဆိုးလိုက် တာ ။မိန်းခလေးတွေ ဘဝဟာ အားမတန် မာန်လျှော့ ဆိုသလို ကျမ ဘဝက လူယုတ်မာ ကိုဘကြမ်းလက်ထဲမာ ပန်းကောင်း အညွှန့်ချိုးခံလိုက်ရတာ ခုထိ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပါဘူး ။
မွေးစားသမီးသန်းသန်း လက်ခုံပေါ်ရောက်နေသော လရည်ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်များကို လျှာဖြင့်သိမ်းကာ မြိုချလိုက်သည်။ပြီးမှ အားမရသလို လီးကိုပါးစပ်ထဲ ရသလောက် သွင်းပြီးနှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းလုပ်ခါ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ဆောင့်ချသည်။ ဒစ်ပေါ်ရုံ ထုတ်ခါ ဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို လျှာဖြင့်သိမ်းသိမ်း လျက်သည်။ပြန်လည်မာန်ကျနေသော လီးတချောင်းကို လက်ဖျားနုနုလေးဖြင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို တယုတယ ကိုင်နေသေး၏။လီးထိပ်မှ လရည်တစ်စက် ဖြတ်ခနဲထွက်လာသေးသဖြင့် လျှာကိုထုတ်ပြီးလျက်လိုက်သေးသည်။ “မ သန်း..တော်ပြီလေ.၊ လရည်မြိုတာ မဝသေးဘူးလား၊ကျွန်တော်တော့ ဒေါင်းနေပြီ၊”
STAYHOMEစတေးဟုမ်း ဒီလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ မထင်တာတွေက ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အမေရိကန်ပြည် အရှေ့ဖျားက မြို့ကြီးတ မြို့မှာ မြန်မာလူမျိုး တက်နေဝန်း နဲ့ ဇနီး ဇွန်ပန်းခိုင်တို့ နေနေကြတာ ဆယ်နှစ် မက ရှိနေပါပြီ ။ တက်နေဝန်းက အိုင်တီသမား တ ယောက် ဖြစ်သလို ဇွန်ပန်းခိုင်က ရုံးတရုံးမှာ
ဆရာမရယ် ဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်။ ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တော့ဆရာမရဲ့ဖြူဝင်းနေတဲ့ခြေသလုံးလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရသည်. .။ ဆရာမ ဝိုင်းစက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေ.. နှာတန်လှလှလေး. .နှုတ်ခမ်းပြဲပြဲဖူးဖူးလေး.. တွေဟာသူ့ရင်ကို တအားလှုပ်ရှားယစ်မူးစေသည်လို့ဆရာ ဦးသိန်းထွန်းနိုင်ထင်သည်. .။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ကျောင်းဆရာမမလုပ်ဘဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးလုပ်ဖို့ကောင်းသည် လို့ဆရာဦး သိန်းထွန်းနိုင်ထင်သည်. . ။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သူတို့ကျောင်းကိုရောက်လာတာ မကြာသေး။ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သည်ရုပ်က ချောသည်. . ။ကိုယ်လုံးကတောင့်သည်. .။ အသားအရေလှသည်။အသံလေးကချိုသည်။ဘာလိုသေးလဲဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့် ရယ်..။ . . ဆရာဦးသိန်းထွန်းနိုင်သည်ဒေါ်ချစ်ချစ်ကျော်မြင့်သူ့ကျောင်းကိုစ..ရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီး..နေ့တိုင်း သူမရဲ့အလှအပ
မီးရဲ့ကိုကြီး မီးရဲ့နာမည် က ဆောင်းပပအောင်။ အသက်ကတော့ 23 နှစ်။ မန်နေဂျာလက်ထောက်။ မီးက နယ်ကပါ။ ရေကြည်ရာမြက်နုဆိုသလို အလုပ်ကိုင် ပေါများရာ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးဆီသို့ တက်လှမ်းရာ ကိုကြီးနဲ့ ဆုံရတာ။ ကိုကြီးက မီးရဲ့အထက်လူကြီး မန်နေဂျာ။ ကိုကြီးလို့သာ ခေါ်တာပါ။ ခုဆို ကိုကြီးအသက်က 40 ပြည့်ပြီ။ ချစ်လွန်းလို့ ကိုကြီးလို့ခေါ်တာ။
အချစ်နယ်မြေ ( မကျူးကျော်ရ )
အချစ်နယ်မြေ ( မကျူးကျော်ရ ) မြိတ်မြို့ ကားဂိတ်ကြီးဝင်းက ညနေစောင်းနေရောင်ပျောက်လုလုဖြစ်နေပေမဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ဆူညံသံ ကားသမားတွေရဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ခရီးသည်ခေါ်သံတို့က ပုံမှန်အတိုင်းပဲလည်ပတ်နေပါတော့တယ် အော်ဟစ်ဆူညံသံတွေကြားထဲ ဓါတ်ပုံနဲ့ပန်းချီဆရာ မလေး ရတီ တစ်ယောက်လည်း ရန်ကုန်သို့ပြန်ရန်အတွက် စီးနင်းရမည့် အန်တီဝင်း ကားဂိတ်နေရာလေးကိုရှာနေပါတော့တယ် စီးနင်းရမည့် ကားဂိတ်ကိုတွေ့တော့ ညီမလေးရေ ညနေ၆နာရီ ရန်ကုန် ကား ဘယ်ကားလည်း
စောက်ဖုတ်ကြပ်ကြပ် တင်ဇာနွယ်မှာ ပထမဦးဆုံးအလိုးခံဘုးသည်ဖြစ်ရာ ဦးသာထွန်း၏လီးကြီးဖြင့်အလိုးခံလိုက်ရသည်ဖြစ်ရာ အားမရှိသလိုပင်ဖြစ် နေကာ ဦးသာထွန်းပြုသမျှ ငြိမ်ခံနေလိုက်ရတော့သည် ။ တင်ဇာနွယ်ကိုဘေးတစောင်းရွှေ့လိုက်မှ သူမ၏တင်ကြီးက လွန်စွာပင် ကားထွက်နေရာ လိုးချင်စိတ်တွေပိုပြင်းထန်လာတော့သည် ။ ထို့ကြောင့်လီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်ဝသို့တေ့ကာထိုးထည့်လိုက်သော် လဲ စောက်ဖုတ်ကကျဉ်းနေသဖြင့်မဝင် ထိုအခါဦးသာထွန်းကလီးထိပ်ကို တံတွေးစွတ်ပြီးထပ်ထည့်လိုက်သည် ။ ဒါတောင် တော်တော်နဲ့မဝင်သေးသဖြင့် ဖိထည့်လိုက်ရာ ” ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်
ဒေါ်နန်းအိစံနှင့်ဂေါ်လီရဲရဲ ဒေါ်နန်းအိစံသည် သူမခင်ပွန်းစားရန်အတွက် ညနေစာကို သူမကိုယ်တိုင်စီစဉ်ချက်ပြုတ်နေလေသည်သူမ၏ အသက်မှာ ၃၉ နှစ်ဖြ စ်ပီး ခင်ပွန်းသည် ကိုဝင်းမြင့်က အသက်၄၅ဖြစ်ကာ သူမထက် ၆ နှစ်ခန့်ကြီးသည်ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ တနေကုန် သူ၏ အလုပ်ထဲ မှာပင်ရှိရာ အလုပ်နှင့်သာ ၁၂ ရာသီ နား ပန်းလုံးနေသဖြင့်သူမတို့ လင်မယားသည် ၂ပတ်လောက်နေမှ သာ တစ်ကြိမ်
ချစ်ရသော မောင် ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် တတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ အိမ်ကလည်းကျွန်မကို တရုတ်တန်းမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးပြီး သူတို့ချစ်သမီး လေးကိုကျောင်းထားးပေးခဲ့တယ် ရှမ်တရုတ်မလေး ကျွန်မ က ဖြူစွပ်တဲ့အသားအရေ နဲ့ . ပြေပြစ်တဲ့ခန္တာကိုယ်အချိုးအစစ် လေးရှိ နေတယ်လေ ရင်၃၆ ခါး၂၁ နဲ့ တင် ၃၈ ဆိုတော့လုံးကြီးပေါက်လှလို့ပဲပြောရမလား ကိုယ်ဟာကိုဂုဏ်ဖော်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် မိဘတွေရဲ့အုပ်ထိန်းမူမှာနေခဲ့
မင်းကြောင့်သာ “ အစ်ကိုလေး ….” အိပ်မပျော်ပဲ မျက်လုံးကြောင်နေသော ကိုသက်အောင် လန့်သွားသည်..။ “ ဟင်…ပုံ့ပုံ့…မအိပ်သေး ဘူး လား…..” ကွယ်လွန်သူ ဇနီးသည်နှင့် ချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့ပုံကလေးများကို ပြန်လည် စမြုံ့ပြန်နေသော ကိုသက်အောင် ရဲ့ ဘော်ဒါကြီး က တင်းမတ်နေသည်..။ ပုံ့ပုံ့က အဲဒါကြီးကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်လေသည်..။ “ မမသီ